Free BF Scalper EA - Best Forex EA si | Ndị ọkachamara ọkachamara | FX Robots
HomeFree Forex EAsFree BF Egwuregwu EA
Amamihe dị n’etiti ndị nweere onwe ha BF Egwuregwu EA is simple but effective – the EA uses breakouts nke Bollinger Njik maka ntinye abanye na ụzọ ọpụpụ.
Ezigbo nkwụsịtụ na-adị n'etiti 20 na 60 pips.
Ị nwere ike iji obere TP dị n'etiti 4-8 pips ma ọ bụ hapụ ntụgharị ahụpụ iji lekọta ọnọdụ ahụ.
Ebumnuche ọpụpụ na-adabere na njirimara BB ma ọ ga-emechi ahịa ahụ ọbụna na ọnwụ mgbe ọnụahịa ahụ dị nso ma ọ bụ na-agbaji akara nke ọzọ BB. Nke a bụ nke Jehova nyere n'iwu BandBreakExit nchịkọta nke na-arụ ọrụ kachasị mma site na obere ma ọ bụ karịa.
The free BF Egwuregwu EA has high spread protection – this is crucial, because if you use limit orders as example you can’t control this and you will take some trades with 10 or even 20 pips spread – one such trade will erase the average profit from 10 good trade as the best average expectancy of this type of trading is 2-3 pips in the best case. This is why we are not using limit orders.
Oge a tụrụ aro: M15
Ụgwọ ego abụọ akwadoro: GBPUSD, EURUSD, EURCHF, EURAUD, GBPCAD, USDCAD, USDCHF na USDJPY
Ntọala ndabara maka GBPUSD. Enwetarala m faịlụ setịpụrụ maka ibe ndị ọzọ kwadoro. Ebe ọ bụ na apụghị m itinye ha ebe a, biko kpọtụrụ m, m ga-ezitere ha gị.
Nke a bụ ụfọdụ njikarịcha na-adụ ọdụ:
Ejila mkpụrụ ndụ ihe nketa
Mee otutu ihe nlere nke 5 maka paramita niile.
Anyị anaghị eji nnwale nnabata maka na ha enweghị ntụkwasị obi.
DỊ mKPA: Lezienụ anya na CTHour1-6 sụgharịa! Ha dị ezigbo mkpa! Iji nweta nsonaazụ kwesịrị ekwesị, ịkwesịrị ịtọ ha n'ụzọ ziri ezi dị ka onye na-ere ahịa gị na ekwentị gị. Na-agụ nlezianya na njikwa nkọwa n'okpuru!
Ihe akọrọ - ma ọ bụrụ na "ụgha," a ga-egbu mgbagha ahụ na mbido M1 mmanya, ma ọ ga-agbakọ na ahia na mpempe ego ọhụrụ.
StealthMode eziokwu / ụgha - nkwụsị nkwụsị ihe nhụsịrị ma nweta uru n'ọtụtụ usoro ihe omume na-eme ka ha ghara ịhụ ndị na-ere ahịa. Ọ bụrụ na ị na-eji ọnọdụ a, nkwụsị nkwụsị ma weghaara iwu nchịkwa adịghị n'ime ngwaọrụ nkesa.
EmergencyStopDist - nke abụọ nchebe, mgbe eji StealthMode. Na ụkpụrụ dị elu karịa efu, ọ na-eme ka ọnọdụ nke abụọ (Ezigbo Mberede) StopLoss dị n 'ebe dị anya karịa na StopLoss zoro ezo. N'ọnọdụ dị otú a, uru nke mberede StopLoss ga-abụ ọnụ ọgụgụ nke MberedeStopDist uru tinyere uru nke StopLoss zoro ezo.
Mmehie - obere oke nha anya maka ahia.
BandPeriod - Oge Bollinger.
BandBreakEntry - breakout na 4-digit pips nke akara BB iji malite ọrụ na-ezighị ezi (uru ahụ nwere ike ịbụ ihe ọjọọ).
BandBreakExit - breakout na 4-digit pips nke na-abụghị BB akara iji malite mmechi nke azụmahịa dị (uru nwere ike ịbụ ọjọọ).
JiriTrendFilter - gbanwee nke a ka ị bụrụ "eziokwu" ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụ ahịa naanị na ntụziaka nke abụọ ndị dị n'okpuru.
MA_Fast_Period - oge na-aga ngwa ngwa.
MA_Slow_Period - oge na-aga ngwa ngwa.
TimeRestriction - na ndabara, nke a bụ "eziokwu" ya mere EA ga-ere ahịa naanị na awa ndị edepụtara n'okpuru. Ọ bụrụ na ịchọọ iji ntinye oge, gbanwee oke a na "ụgha".
Usoro ndị ọzọ dị mkpa
CTHOUR1 - 6 - oghere isii kwesiri ike maka awa ahia. Ụkpụrụ 0 - 23 rụọ ọrụ oghere ahụ. Tinye nnukwu uru dị ka 55 iji kwụsị oghere. Ihe nchoputa kachasị na nmuta anyi bu na 21 na 22 GMT. Ị ga-ekwesịrị iji oge a mee ka ndị na-ere ahịa gị na-agbanwe. A na-emezi ụkpụrụ ndabara maka GMT + 2 (oge oyi).
WednesdaySwapFilter eziokwu / ụgha - Nchịkọta nke nchịkọta nke Wednesday ga-ehichapụ ahịa nile na Wednesday mgbede na ntụziaka nke nzigharị ahụ, ma ọ bụrụ na swap dị njọ karịa MaxNegSwapPips.
MaxNegSwapPips - na pips 0.5 pips dị ka ọnụ ụzọ ziri ezi.
RolloverTimeFilter eziokwu / ụgha - gbanye / gbanyụọ nzacha rollover oge.
Obere oge Tupu tupu - nkeji oge nkeji tupu etiti abali, nke a ga-eme ka a kwụsị ọrụ niile.
Nkeji oge - oge nkeji oge etiti etiti abali, nke a ga-eme ka a kwụsị ọrụ niile.
x_MaxSpreadFilter - gbanyụọ / gbanyụọ mgbapụ ọzọ na-agbasa ntan.
x_MaxSpread - mepụta MaxSpread mbụ, nke a ga-ahapụ n'ozuzu ya, tupu ịkagbu ọrụ niile. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na MaxSpread bụ 6 na x_MaxSpread bụ 2, a ga-eme ka ọrụ niile nke ahịa kwụsịrị ma ọ bụrụ na mgbasa ozi karịrị 6 × 2 = 12 pips.
RecoveryMode - mee ka iweghachi na mgbapụta. Ọ na-arụ ọrụ mgbe AutoMM> 0.